पाल्पा ९ वैशाख
बगनासकाली गाउपालिका पाल्पाले किसानको तरकारी सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स मार्फत उपभोक्ताहरुको घर घरमा तरकारी वितरण सुरु भएको हो । मंगलवारदेखी पोखराथोकका किसानहरुको तरकारी बारीबाटै संकलन गरी गाउपालिकाका अन्य वडाका उपभोक्ताहरुलाई सोझै विक्री वितरण गरिएको छ ।
कृषि एम्बुलेन्स संचालन गरी पहिलो दिन बन्दा र काक्रो खरिद गरी विक्री वितरण गरिएको छ । “किसानहरु मर्कामा परे, दुःख गरी लगाएको तरकारी लकडाउनले गर्दा बेच्न समस्या भयो ।” बगनासकाली गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्याल भन्नुहुन्छ ।“हामीले ढुवानी गरिदिएका छौं, अव किसानको तरकारी सोझै उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने छन् ।”
मंगलवारदेखी सुरु गरिएको कृषि एम्बुलेन्स मार्फत ५ टन किसान संग खरिद गरी विक्री गरिएको छ । पहिलो दिन बगनासकाली गाउपालिका वडा नं. २ पोखराथोकका किसान संग खरिद गरी वडा नं. ९ चापपानीमा विक्री गरिएको छ । “ दुःख गरेर उब्जाएको तरकारी बेच्न नपाउदा किसानहरु वास्तवमै मर्कामा रहेछन्, हामीले घर घरमा गएर खरिद गरी बेच्न सहजिकरण गरेका छौं ।” गाउपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदी भन्नुहुन्छ ।
बन्दा प्रति किलो १० रुपैया र काक्रो प्रतिकिलो ४० रुपैयाका दरले मंगलवार खरिद विक्री गरिएको छ । बगनासकाली गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले किसानलाई राहत दिन गाउपालिकाले यो अभियान चलाएको बताउनुभयो ।“दुःख गरी उब्जाएको तरकारी अन्य कुनै वडामा पनि विक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने हामी वेच्न सहजिकरण गछौं ।” श्रेष्ठको भनाई छ ।
लकडाउनका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अहिले किसानहरु मर्कामा परेका छन् । खासगरी व्रोइलर कुखुरा पालन गर्ने किसानहरु कुखुरा बेच्न नपाउदा अप्ठेरोमा परेका हुन् । लकडाउनका कारण दाना पनि भनेजती नपाइने कुखुरा उत्पादन भएपछी बेच्न पनि गारो हुने स्थिती आएको छ । तर बगनासकाली गाउपालिकाले आफ्नो पालिका भित्रका कुखुरा पालन गर्नेहरुको कुखुरा विक्रीका लागि पनि सहजिकरण गरेको छ ।
मंगलवार सम्ममा २ हजार बढी कुखुराहरु गाउपालिकाको सहजिकरणमा विक्री भएका छन् । बगनासकाली गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालको पहलमा कुखुरा विक्री नभएको गुनासो आएका किसानहरुको कुखुरा विक्री गरिएको छ । “विभिन्न ठाउँका व्यवसायिक व्यत्तिःहरु संग मैले सहजिकरण गरी कुखुरा विक्रीका लागि सजिलो गराएको छु ।” अध्यक्ष बस्यालको भनाई छ ।
बगनासकालीले कृषकलाई विउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने
नेपाली काँग्रेस बगनासकालीद्धारा विपत व्यवस्थापनकोषमा ५० हजार १ सय ११ रुपैया सहयोग